TOP 5: Shanta Saddexley Weerar Ee Ugu Fiicnaa Taariikhda Premier League Oo La Qiimeeyay & Booska 1-aad Laga Qaaday Salah, Mane & Firmino - Gool24.Net
TOP 5: Shanta Saddexley Weerar Ee Ugu Fiicnaa Taariikhda Premier League Oo La Qiimeeyay & Booska 1-aad Laga Qaaday Salah, Mane & Firmino
May 17, 2020 Apdihakem Omer Adem
Dhawaan ayay ahayd markii halyeeyga kooxda Manchester United ee Gary Neville uu ku dooday in saddexleydii weerar ee kooxdiisa ee Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney iyo Carlos Tevez ay ka wanaagsanaayeen kuwa haatan ee Liverpool ee Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Roberto Firmino.
Xaalad kastaba, wargeyska Daily Mail ayaa haatan qiimayn ku sameeyay shanta saddexley weerar ee ugu wanaagsan abid Premier League si doodii hadalka Neville ka dhalatay loosoo af-meero.
5. Arjen Robben, Damien Duff and Didier Drogba (Chelsea)
Saddexleydan ayaa muhiim usoo ahaa guushii Jose Mourinho ee Chelsea ee badhtamihii 2000-kii, nasiib darro waxa ay dhaawacyo dishoodeen Robben iyo Duff balse 27 kulan oo ay wada safteen ayay guuldarro la’aan xidhiidh ah galeen iyagoo 25 kamid ah guuleystay.
4. Raheem Sterling, Leroy Sane and Sergio Aguero (Manchester City)
Saddexdan xiddig ayaa muhiim u ah in Man City ay qabsato kubadda cagta England intii u dhaxaysay 2017-2019, nasiib darro Sane ayaa xilli ciyaareedkan oo dhan dhaawac u maqnaa sidoo kalena Bayern Munich ku biiri kara xagaaga.
3. Robert Pires, Dennis Bergkamp and Thierry Henry (Arsenal)
Guulihii Arsenal ee horraantii sanadihii 2000 ayay si weyn sabab ugu ahaayeen saddexleydan weerar ee holaca ahaa, Pires ayaa garabka wacdarro kasoo dhigayay halka Bergkamp iyo Henry ay weerarka dhexe isku kaashanayeen, waxay soo wada ciyaareen 128 kulan iyaga oo 272 gool soo dhaliyay.
2. Mohamed Salah, Sadio Mane and Roberto Firmino (Liverpool)
Saddexleydan weerar ayaa lagu sifayn karaa kuwa haatan ugu wanaagsan dunida, Mane iyo Salah ayaa garbaha weerarka argagax kaga sameeya kooxaha ay wajahayaan halka Firmino uusan goolal badan u dhalinin sida weeraryahanada kale ee caalamiga ah balse isku xidhkiisa Mane iyo Salah iyo caqli badnaantiisa ayaa laf-dhabar u ah Reds, guud ahaan 81 kulan oo Premier League ah oo ay soo wada ciyaareen ayay 178 gool kusoo dhaliyeen.
1. Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez and Wayne Rooney (Man United)
Saddexleydan weerar ayaa dhab ahaan wax kale ahaa, xilli ciyaareedkii 2007-08 oo kaliya ayay 79 gool iyo 30 gool caawimo kusoo diiwaan gashadeen iyagoo ku hoggaamiyay Man United Premier League iyo Champions League.
Nasiib daro Tevez ayay isku dhaceen Ferguson kana dhaqaaqay Man United balse 42 kulan oo ay soo wada safteen saddexdan weeraryahan ayay 93 gool kusoo diiwaan gashadeen.
Dabcan Mane, Salah iyo Firmino ayaa ah kuwo tayo ahaan wanaagsan balse waxa ay u baahan yihiin inay ciyaartooda sii horumariyaan si ay ula heer noqdaan Ronaldo, Rooney iyo Tevez.
Anigu anoo aan uhadlaynin habtaageeranumo hadana lama xaqirikaro salah mane iyo firmino waxaan oran karaa wayka waqti dheraaye roney ronaldo iyo tavez